कुन विश्व नेतासँग तपाईं मिल्दोजुल्दो हुनुहुन्छ? - BBC News नेपाली
कुन विश्व नेतासँग तपाईं मिल्दोजुल्दो हुनुहुन्छ?
7 नोभेम्बर 2016
बीबीसी मनिटरिङले भेला पारेको तथ्याङ्कका आधारमा विश्वका १९५ नेताहरुमध्ये कोसंग तपाईं मिल्दोजुल्दो हुनुहुन्छ? पत्ता लगाउनुहोस्।
अमेरिकामा नयाँ नेता निर्वाचित हुँदै गर्दा, संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिको तुलनामा तपाईं आफूलाई कस्तो ठान्नुहुन्छ? के तपाईं उनीहरुभन्दा बढी शिक्षित हुनुहुन्छ? उनको भन्दा तपाईंको उमेर बढी वा कम के छ? आफ्नो काममा के तपाईंको बढी अनुभव छ?
विश्वका नेताहरू कति उमेरका छन्?
धेरैजसो नेताहरुको उमेर ५० देखि ७० वर्षको बीचमा छ, तर केही अपवाद छन् विश्व नेताहरुको औसत उमेर ६२ वर्ष छ। मध्यपूर्वी र अफ्रिकी मुलुकहरुका नेताहरु अलि बुढा छन्, जबकि युरोपेली मुलुकका नेताहरु युवा। सबैभन्दा युवा १० जना विश्व नेताहरुमध्ये आठ जना युरोपेली छन्।
औसतमा अफ्रिकी नेताहरु युरोपेली नेताभन्दा १० वर्षले जेठा छन्।
समग्रमा विश्व नेताहरु निकै शिक्षितहरुको जमात हो। तुलनात्मक रुपमा तपाईंको स्थान कहाँ छ?
विश्वका नेताहरु कति शिक्षित छन्?
करिब ८० % विश्व नेताहरुले विश्वविद्यालय शिक्षा हासिल गरेका छन्। खासगरी वाणिज्य, अर्थशास्त्र तथा कानुन धेरैको रुचिका विषय हुन्।
१८ जना विश्व नेताले एक वा अर्को किसिमको सैन्य अध्ययन गरेका छन् जसमा चार जनाले संयुक्त अधिराज्यको स्याण्डहर्स्टस्थित रोयल मिलिटरी एकेडेमीमा पढेका छन्।
तर कुनै औपचारिक शिक्षा नलिएपनि जेकब जुमालाई दक्षिण अफ्रिकाको राष्ट्रपति हुनबाट त्यसले रोक्न सकेन।
कुन देशमा गएर सबभन्दा धेरै विश्व नेताले शिक्षा लिएका छन्?
वर्तमान विश्व नेतामध्ये १६% प्रतिशतले अमेरिकी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका छन् जहाँबाट शिक्षितहरुले मंगोलिया, माल्दिभ्सदेखि माइक्रोनेसियासम्म शासन गरिरहेका छन्।
दोस्रो रुचाइएको गन्तव्य रहेको संयुक्त अधिराज्यमा वर्तमान विश्व नेतामध्ये १० % ले अध्ययन गरेका छन्।
तेस्रो स्थानमा फ्रान्स छ जहाँ ८% विश्व नेताले पढेका छन् - खासगरी फ्रान्सेली भाषा बोलिने पश्चिम अफ्रिकी देशका नेताहरु फ्रान्सेली विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न रुचाउँछन्।
पोप फ्रान्सिस विश्वको एक सबैभन्दा ठूलो धार्मिक सम्प्रदायका प्रमुख हुन्। तर उनले शुरुमा रसायनशास्त्र पढेका थिए। उनी एक प्रशिक्षित ल्याब प्राविधिक हुन्।
काममा बिताएको समय
अधिकांश देशमा सीमित पदावधि र निर्वाचनहरुका कारण लामो समय सरकारमा रहन गाह्रो हुन्छ। तर केही नेता दशकौंसम्म पदमा रहन सफल छन्। तिनको तुलनामा तपाईंको स्थान कहाँ होला?
कति लामो समयदेखि छन् विश्वका नेताहरू तिनका ओहोदामा?
हालका विश्व नेताहरू औसतमा सात वर्ष आफ्नो पदमा बहाल रहेका छन्। ओमनका सुल्तान कबुस बिन सइद अल सइद हाम्रो डेटाबेस अनुसार विश्वमैं सबभन्दा लामो समय शासन गर्ने नेता हुन् जो गत ४६ वर्षदेखि सत्तामा छन्। उनी जति लामो समय सत्तामा बस्ने कोही पनि छैनन्। तर नौजना अफ्रिकी नेताहरू 20 वर्षभन्दा बढी समयदेखि सत्तामा छन्।
ओमनका सुल्तान कबुस बिन सइद सत्तामा आएको वर्ष सन् १९७० मा हालका १४ जना विश्व नेताहरूको जन्म पनि भएको थिएन।
तपाईंको तुलना कसरी हुन्छ?
१९५ देशका नेताहरुको उमेर, शिक्षा तथा पदावधि बीबीसी मनिटरिंगले जम्मा पारेको हो। त्यो तथ्यांक अन्तिम पटक १५ सेप्टेम्वर २०१६ मा अद्यावधिक गरिएको थियो।
जन्म मिति वा शिक्षाबारे सूचना उपलब्ध हुन नसकेका नेताहरुलाई सामेल गरिएन।
यो कार्यका लागि देशका नेता भन्नाले यथार्थमा उक्त देशको धेरै शक्ति प्राप्त व्यक्ति हो।
सान मारिनोको हकमा जहाँ दुई राष्ट्रप्रमुख हुन्छन् र दुवैले उत्तिकै शक्ति प्रयोग गर्छन् - एकजनालाई त्यत्तिकै छानियो।
अधिकांशको हकमा पदको शपथ लिएको वा पद सम्हालेको मितिलाई नेता शक्तिमा रहेको प्रारम्भिक मितिको रुपमा लिइएको छ।
क्रेडिट: नासोस स्तालियानु, एड लोथर, एलिसावेटा टोलार्डो र जन वाल्टनद्वारा तयार पारिएको। तथ्याङ्क अनुसन्धान: बीबीसी मनिटरिङको अनुसन्धान टीम डिजाइन: टम नर्स, गेरी फ्लेचर र जो बार्थोलोम्यु थप मदत: स्टेभेन कोनर तथा बेकी रश